Matte Black Dọọ Down Kitchen foset
Home / Faucets kichin / Wetuo mmiri / WOWOW Matte Black Kpoo-Down raygba Kitchen Foset
WOWOW Matte Black sere-Down raygba Kitchen foset
Matte nwa kichin faucet mara mma na ezigbo mma
WOWOW nwere ahụmịhe ụlọ ọrụ na -eme ka nwunye kachasị mma weda ọkpọ mmiri esi na kichin kemgbe 2008. Obi abụọ adịghị ya na ahụmịhe ahụrụ ọrụ a bụ nke ọma na arụmọrụ na atụmatụ nke mkpọda kichin WOWOW. Site na ahụmịhe a, enyere gị aka ịnwe faucet kachasị mma na kichin gị, emebere maka arụmọrụ kachasị yana n'ikpeazụ nwere njiri pụrụ iche. Maka nke a, akwa a dị elu ojii na-agbada isi nri ime ụlọ nke WOWOW bụ nhọrọ kachasị mma mgbe ị na-echepụta ma ọ bụ na-edegharị kichin gị.
WOWOW Kpọrọ isi nri kichin 2310700B
Kichin nwere ike ịbụ ohere n'ụlọ gị ebe ị na-etinye oge ka ukwuu. Ọbụghị naanị na kichin bụ ebe ị na-akwadebe nri gị. Ọzọkwa, ọtụtụ mmadụ etinyewo ndụ ha n'akụkụ kichin. Chee echiche banyere otu esi nri na kichin na nnukwu tebụl iri nri n'akụkụ ebe a na-eme nri. N'agbanyeghị ụdị kichin ị nwere, imewe na ịrụ ọrụ bụ akụkụ abụọ kachasị mkpa na ya. Mgbe ị na-emebe ma ọ bụ na -eweghachi kichin nrọ gị, ịchọrọ ịme oke echiche. Nhọrọ nke kichin kichin bụ nke dị ezigbo mkpa. Ọ bụ ezie na ọkpọkọ kichin nwere ike ịdị obere, ha bụ isi ihe okike nke kichin ọ bụla. Ndị mmadụ na-ahụkarị ihe ọkụkụ na kichin. Ya mere, ị ga - enwerịrị echiche na WOWOW arc matte ojii kwatuo kichin kichin! The WOWOW matte nwa kwatuo kichin foset na-enye a elu mma kwatuo kichin foset na magburu onwe imewe na nnọọ ọnụ ala. N'ihi ya, a matte nwa kwatuo kichin foset na-enye gị ihe kasị mma price-arụmọrụ ruru ị ga-ahụ na ahịa.
Designkpụrụ mara mma wulite isi mmiri kichin na matte ojii
Ego ohuru nke WOWOW elu arc matte ojii na-akwada ebe a na-esi nri kichin nwere njiri mara mma nke klaasị echigharị na nkọwa nke ụdị ọgbara ọhụrụ. Maka nke a, nsị a kichin ga-agbakwunye mmetụ mara mma n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kichin ọ bụla. O doro anya na ị ga-ahọrọ ụta mmiri kichin gị nke ọma. N'ụzọ ọ ga --eme ka ịdị n'otu kwekọọ na ndị ọzọ na kichin gị. Uru nke a matte ojii na-akwada ebe a na-ere kichin bu nke enwere ike ikpokorita ya na ihe ndi ozo, yana na kichin ohuru Ka o sina dị, WOWOW's matte black dọktọpu ọkpọkọ kichin ga-ekwe nkwa mmetụ dị egwu na-emetụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kichin ọ bụla. Ọ bụghị naanị na nke a gooseneck matte nwa kichin faucet na-enye gị obere ihe ejiji. Ihe dị mfe bụ otu ihe dị na njiri mara mma nke ebe a na-eme kichin. Ka o sina dị, ọ na-enye nkwupụta nkọwa dị egwu na agba ya pụrụ iche na njikọta nke ụdị. Ikwu eziokwu, na WOWOW anyị na-atụle nke a matte ojii na-akwada isi nri kichin mpempe nka! Anyị ji n'aka na mgbe ị na-etinye akwa mmiri esi nri a na kichin gị, ọ ga-ebute ọtụtụ mmeghachi omume nke ndị ọbịa gị.
Mate ojii kwatuo faucet na arụ ọrụ kachasị na kichin gị
Imewe bụ otu, mana nke ka mkpa bụ arụmọrụ ụlọ ishii kichin. Mgbe ị nọ na kichin gị na ADesign bụ otu, mana ọzọ dị mkpa bụ arụmọrụ nke mmiri idị mmiri. Mgbe ị nọ na kichin gị kwa ụbọchị, na-akwadebe ihe ndị na-akọ nri, ịchọrọ ka ọ kwado gị mgbe ị na-akwadebe nri ma hichaa ya. N'ihi ya, ị ga-ahọta ebe a na-esi nri kichin na-akwado ihe ị na-achọ banyere ụdị ọrụ kichin niile. Ezubere WOWOW akwa arc matte ojii na-agbadata kichin kichin bụ iji nye gị arụmọrụ kachasị. Ọ bụghị maka ihe ọ bụla, a na-ewere matte ojii na-agbada isi nri kichin dị ka otu n'ime ihe ndị kachasị arụ ọrụ na-agbada ọnụ mmiri kichin n'ahịa. Akụkụ a na-adọba akụkụ nke matri ojii kichin a na-eji esi nri arụ ọrụ adịghị arụ ọrụ. Nke mbu, ị nwere ike iwepu isi onye na-ewepu onwe ya ka ịsacha akụkụ niile nke ụlọ ịsa ahụ gị. Ke ama akada ada odori ke ibuot adaha, afiak ada idemesie akaha ke nte ekem. E wezụga gị ị nwere ike ịgagharị n'etiti ihe dị nro na akwa siri ike dịka ọrụ kichin gị. Ihe na - agbanwe swatel nke matte ojii na - agbada akwa mmiri kichin ga - ewetara gị ngbanwe ịchọrọ.
Igwe anaghị acha nchara matte ojii na-akwatu isi nri kichin
A na-eji ọla nchara na ihe ndị ọzọ dị elu mee WOWOW's matte black fauket faucet. Igwe akwa a na-esi na kichin a na-adọkpụ abụghị naanị na ọ na-eguzogide ma ọ dịkwa nchara na-eguzogide na unyi na-eguzogide. WOWOW matte ojii na-agbada isi mmiri kichin dị mfe nhicha. Mfe dị nfe ga-ewepụ nsị ọka na nzu na-ewu n’elu silicone. Uclọ ịsa ahụ na-esi na kichin n'onwe ya dị mfe nhicha yana ntụpọ ahụ agaghị esonye ya. Mgbe ị na-asacha akwa mmiri kichin ojii gị, ga-enwe ogologo ntachi obi. Nnukwu arc matte ojii na-akwatu akwa mmiri nke WOWOW dị mfe ịwụnye ma na-abịa na ntinye ntụziaka doro anya. Ka ọ na-achịkwa ihe nrịgo 90 n’ihu, ọ na-enye gị ohere ịwụnye akwa a na-eji esi nri kichin ojii n’ebe a na-agbachapụ agbachapụ, na-enweghị mwepụ counter ọ bụla achọrọ. Ndị na-emepụta WOWOW echebarala echiche banyere ihe niile na-ese ihe matte ojii nke a na-akwada isi nri kichin. Yabụ na WOWOW anaghị atụ egwu inye gị akwụkwọ ikike afọ atọ na onye ọlụlụ ya na-agbada isi nri kichin. Anyị ji n'aka na ngwaahịa nke ngwaahịa anyị ma na-ekwe nkwa na ị ga-akasi gị obi na ngwaahịa anyị ga-arụkwa ọrụ kachasị. Kedu mgbe ihe ọ bụla na mmiri mmiri kichin a nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ dịka ị tụrụ anya n'aka anyị, anyị ga-edochi ngwaahịa ahụ na-agaghị akwụ ụgwọ maka gị. N'ikpeazụ, anyị na-enye iwu ịlaghachi azụ ụbọchị 90 n'efu n'ihe gbasara matte black kitchen faucet nwere ike ọ gaghị abụ ihe ị tụrụ anya ya. Dịka ị pụrụ isi kwuo ya, anyị tụkwasịrị obi na di ma ọ bụ nwunye anyị gbadawa esi na kichin. N'ihi nke a, anyị ga na-atụ anya na afọ ga-eju gị afọ!
Uru nke WOWOW elu arc mate ojii na-akwada isi nri kichin na nkenke:
Ọ na-enye kichin ọ bụla
Ngwakọta pụrụ iche na nke ọgbara ọhụrụ
Na-ejikọ esthetics na arụmọrụ dị elu
Ihe eji eme ihe di elu
Akwụkwọ ikike ikike afọ 3 dị elu nke nwanyị a na-eji oji ojii weda kichin kichin
SKU: 2310700B Categories: Faucets kichin, Wetuo mmiri Tags: Akwa Arc, matte Black, Gbatuo
2.6 n'arọ = 5.7320 lb = 91.7123 oz
21.65 x 11.02 x 2.76 sentimita
Kitchen foset / kichin imi foset na-ada ala sprayer
Single-Oghere & 3 Oghere; Ugwu
Akwa Arc / Gooseneck
1-Oghere ma ọ bụ 3-Oghere na 8 nke anụ ọhịa oche efere Covering
7.7 sentimita asatọ
Atọ atọ: Stream / Spray / Cheretụ
WOWOW Matte Black Kitchen igwekota Kpatụ
WOWOW Single-Hand Pull-Out Sprayer Kitchen Fa ...
WOWOW Pot Filler gbara ọkpụrụkpụ Nickel